Microsoft Excel Myanmar Unicode Font Issue in Mac - Saturngod Saturngod
 22nd September 2019
Microsoft Excel Myanmar Unicode Font Issue in Mac
Mac မှာ Unicode font သုံးရင် Microsoft Excel မှာ Unicode မရပါဘူး။ အဓိက ပြဿနာက AAT rendering လိုနေပါတယ်။ AAT ထည့်သွင်းမရေးထားသည့် Font တွေက Mac Excel မှာ အလုပ်မလုပ်ဘူး။ ဒါကြောင့် Unicode သုံးမယ်ဆိုရင် AAT ပါသည့် Myanmar MN သို့မဟုတ် masterpiece ကို သုံးမှ ရပါလိမ့်မယ်။
Myanmar MN ပဲထည့်ထားတာပါ၊ မြန်မာ Font ကို Excel 365 မှာမပေါ်လို့ခင်မျ၊ လက်ရှိသုံးနေတာက MacOs Sierra 10.13.6 ပါ၊ laptop က macbook air 2010 late ပါ၊ မြန်မာဖောင့်တွေပေါ်ဖို့အတွက် KeyMagic ကို Install လုပ်ထားပါတယ်၊ KeyMagic မှာပါတဲ့ font တွေက Pyidaungsu font, Myansan, Zawgyi, Yunghkio SHAN, ဇော်ကုဒ် တို့ပါဝင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော် အကုန်လုံးကိုသုံးကြည့်ပီးပါပီ၊ တခုမှ ရိုက်လို့အဆင်မပြေပါဘူး၊ Excel မှာပဲပြောတာနော်၊ ကျန်တဲ့နေရာတွေကျ အကုန်ရိုက်လို့ရပါတယ်ခင်မျ၊ အခု ဒီမှာလဲ ရိုက်လို့ရပါတယ်၊ FB Msger လဲရိုက်လို့ရပါတယ်၊ Excel 365 မှာပဲရိုက်လို့အဆင်မပြေတာပါ၊ ကူညီပေးပါလားခင်မျ
online မှာတော့ မရဘူး ခင်ဗျ။ ပုံမှန် excel မှာတော့ Myanmar MN က အဆင်ပြေပါတယ်။
Kyaw Htet Khaing says:
Hi, I am experiencing the problem as u said, unicode works good in other MS office in Mac but Excel. Would you be kind enough to guide me where to download the ATT Myanmar MN or Masterpiece Font as u mentioned? It's hard to find online. Much appreciated.
Zawgyi Decode Profile Change to Unicode Again